Mapurisa Akapakata Zvombo Anorambidza Musangano weCitizens'Coalition for Change kuMarondera
Mapurisa eZimbabwe Republic Police achivharira nhengo dzeCitizens Coalition for Change kuti dzisaita musangano wadzo kuMarondera
Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change, VaNelson Chamisa, kuita musangano nevatsigiri vavo kuMarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare.
Mapurisa anga akapakatira pfuti nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afumira kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yeRudhaka Stadium kuMarondera umo manga muchifanira kuitwa musangano naVaChamisa nevatsigiri vavo.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichiimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira hutungamiri hwebato razvo hwanga hwaenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe.
Pavazopihwa mukana nemapurisa wekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare, VaChamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda.
VaChamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC, VaOstallos Siziba vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo wekuDulibadzimu Stadium kuBeitbridge mangwana zvisineyi nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti Zanu PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
Mumwe mutsigiri weCCC anga auya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu, Amai Jane Chikandwa, vati kunyange hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yarambidza VaChamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda.
Tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi.
Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veCCC kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCovid 19 chinogona kupararira kana musangano uyu wakabvumidzwa kuenderera mberi.
Asi izvi zvanga zvichipikiswa nevatungamiri veCCC vanosanganisira VaCharlton Hwende naVaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana Covid 19 iriko zvechokwadi bato reZanu PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro.
Vari kukwikwidza musarudzo dzema by-elections dzekutsvaga mumiriri weMarondera Central muparamende ndiVaCaston Matewu veCCC, VaIgnatius Mateveke vari kumirira Zanu PF pamwe naVaWitness Muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance.